Belçikada tren seferleri durdu - RayHaber
[07 / 10 / 2019] ထင်းရူး Grove ရထား Met ပြတိုက်အတွက်ကလေးများ Demiryolc Group မှ	09 Aydin
[07 / 10 / 2019] Bursa မြန်ရထားရပ်တန့်ဖို့ site ကို, အဝေးမှမျှော်ပေါ်နေဖို့လာ	16 Bursa
[07 / 10 / 2019] တစ်နာရီကိုတရုတ်နိုင်ငံ၏ 1000 ကီလိုမီတာ 2020 အတွက်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်တဲ့မြန်နှုန်း Maglev ရထားရောက်ရှိ	86 တရုတ်
[07 / 10 / 2019] အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်ခများဖို့အချိန်	06 တူရကီ
[07 / 10 / 2019] ကိုယ့်ညွှန်ကြားချက် Start မှတူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းကနေအာဒိုဂန်ဥက်ကဋ်ဌ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[07 / 10 / 2019] ထိုအချိန်ကာလ၏ Bosphorus တံတားနှင့်အဝေးပြေးခွန်ကောက်ရာခိုင်နှုန်းကို 20	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[07 / 10 / 2019] de ဗိသုကာပညာရှင်များနှင့်အင်ဂျင်နီယာများ, Sapanca cable ကိုကားတစ်စီးစီမံကိန်းကိုဆန့်ကျင်ကဆိုပါတယ်	54 Sakarya
[07 / 10 / 2019] အဆိုပါ Marmaray လုပ်ဖို့ရာဖီတီပန်းချီသန့်ရှင်းရေး Kit	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[07 / 10 / 2019] ARUS, Ferroviaria ရထားစနစ်များကို Fair မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကိုယ်စားပြုထားပါတယ်	06 တူရကီ
[07 / 10 / 2019] install လုပ်ဖို့မတော်တဆမှု "အစောပိုင်းသတိပေးစနစ်" ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ Tools များမှ Metrobus	34 အစ္စတန်ဘူလ်
10 / 10 / 2015 Levent Ozen 32 ဘယ်လ်ဂျီယံ, ဥရောပ, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား 0
ရထားဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရပ်တန့်: ဥရောပနှင့်အတူနိုင်ငံ၏ရထားလမ်း link ကိုအတွက်ရထားလမ်းလုပ်သားများကစီစဉ်ဘယ်လ်ဂျီယံအထွေထွေသပိတ်ပြတ်တောက်ခဲ့သည်။
အစိုးရ၏ခြိုးခြံခြွေတာရေးဆောင်ရွက်ချက်များအတိုင်းအတာအတွင်းကိုဖန်ဆင်းလုပ်ခဖြတ်တောက်မှုဆန္ဒပြရထားလမ်းအလုပ်သမားများ, 24 နာရီသပိတ်စတင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါရထားလမ်းများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်အကြောင်းကို4တထောင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြီးအကဲစပယ်ယာပွုလုပျခွငျးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု, ယူကနိုင်ငံ၏ရထားကောက်ကြောင်း၏ပြီးပြည့်စုံရပ်တန့်ဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ရထားသပိတ်အတွက်အလေးအနက်ပြတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့အိမ်တွင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ် 22.00 နာရီသည်အထိဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ဘရပ်ဆဲလ်အတွက်အောက်တိုဘာလအတွက်တထောင်7100 အကြောင်းကိုဆန္ဒပြသူတချို့ဆန္ဒပြသူတွေကရဲနှင့်အတူတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားအခြိနျမှနျမှ, ဖက်ဒရယ်အစိုးရကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြိုးခြံခြွေအစီအမံဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖို့ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်သိမ်းယူကြ၏။
ဘယ်လ်ဂျီယံဘဝအတွက်မီးရထားလုပ်သားတွေရဲ့သပိတ်ရပ်သွား 16 / 12 / 2014 ဘယ်လ်ဂျီယံဘဝအတွက်မီးရထားလုပ်သားတွေရဲ့သပိတ်ရပ်သွား: တစ် walkout ဘယ်လ်ဂျီယံရဲ့ Walloon တွင်အဆိုပါရထားလမ်းအတွက်ရှိခဲ့သည်။ ဘဝမှတ်တိုင်၏စင်မြင့်မှယူဆောင်ရထားလမ်းလုပ်သားတွေရဲ့သပိတ်။ ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်အစိုးရသစ်၏ပင်စင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဆန္ဒပြအများပြည်သူန်ထမ်းတစ်ဦးတစ်ရက်သပိတ်မှောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအောက်ပိုင်းသေခဲ့သည်။ ကြောင့်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများလေယာဉ်များ၏ထောက်ခံမှုပေးခဲ့တယ်သောသပိတ်မှ, ဘတ်စ်ကားနဲ့ရထားဝန်ဆောင်မှုရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက် Walloon အဘိဓါန်ဒေသအတွက်ရထားလမ်းအတွက် walkout ခဲ့ကြသည်။ ဘဝမှတ်တိုင်၏စင်မြင့်မှယူဆောင်ရထားလမ်းလုပ်သားတွေရဲ့သပိတ်။ ဘရပ်ဆဲလ်ကနေ Eurostar ကြောင့်တစ်ရက်သပိတ်မှောက်အားလုံးပျံသန်းမှုဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ဘရပ်ဆဲလ်, ထိုချို့ယွင်းပဲရစ်နှင့်လန်ဒန်အကြားပြေးဆွဲမှုမရှိသည့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းများအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ...
ဘယ်လ်ဂျီယံမီးရှို့ဓာတု-ဝန်ကိုထမ်းရွက်ရထား (ဗီဒီယို) 06 / 05 / 2013 ဘယ်လဂျီယံဓာတု-ဝန်ကိုထမ်းရွက်ရထားပေါက်ကွဲမှု 1 33 သေဆုံးသူနှင့်အခြားသူများဒဏ်ရာရရှိစဉ်အတွင်းဓာတု-ဝန်ကိုထမ်းရွက်ကုန်တင်ရထားလောင်ကျွမ်းဖို့ Wetteren ရလဒ်များကို၏ဘယ်လ်ဂျီယံမွို့၌ကိုမီးရှို့ကြ၏။ အရာရှိများကအဖြစ်အပျက်သုတေသနဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကိုမတှေ့နိုငျဘယ်လောက်သေးဆက်လက်ခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာနယ်သာလန်နိုင်ငံဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ရပ်များ 02.30 ဒေသစံတော်ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ထံမှကားများ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်း။ အဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်မတော်တဆဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ပစ္စည်းပြန်လည်ထူထောင်စက်လုပ်သမား recover လုပ်ဖို့ဂျာမန်အာဏာပိုင်များတင်ဆောင်လာသောကုန်တင်ရထား၏ဒတျချြအင်ဂျင်နီယာ, ထိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့်အတူသူကပြောပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်များနှင့်တာဝန်ရှိသူများစဉ်အတွင်းအသက်ဆုံးရှုံးကြောင်း 1 လူတွေ 30 လူတွေကိုအဆိပ်ထက်ပိုပြီးကပြောသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံ ...
ဒါဟာဘယ်လဂျီယံရထားပျက်ကျမှုအတွက်သုံးဘဝတွေကိုယူ 06 / 06 / 2016 ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်မီးရထားပျက်ကျမှုသုံးဘဝတွေကိုယူ: မတော်တဆမှု Saint-ဇော့-sur-Meuse အတွက်ညဥ့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်, ထိုခရီးသည်ရထားများ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဦးကုန်တင်ရထားသို့ပျက်ကျသွားသည်။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်နင်္ဂနွေနေ့ညဥ့်ဒေသစံတော်ချိန် 23.00 ရေကိုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ SnCl ဖြင့်ကြေညာချက်အရသိရသည်ခရီးသည်တင်မီးရထား၏ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံပိုင်ရထားလမ်းကုမ္ပဏီ, အကြှနျုပျသညျများ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဦးကုန်တင်ရထားသို့ပျက်ကျသွားသည်။ အဆိုပါခရီးသည်တင်မီးရထား၏ခြောက်လရထားနှစျယောကျလွဲချော်ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ဧရိယာလူနာတင်နှင့်မီး၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကိုရည်ညွှန်းခဲ့ပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့သည်ဒဏ်ရာရကယ်တင်နိုင်ခဲ့သောမတော်တဆထိခိုက်မှုန်းကျင် SNCB ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Nathalie Pierard ကိုလည်းပြီးဆုံးသည့်အခါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဟာချုံးချုံးကျသွားတယ်၏မြင်ကွင်းတစ်ခုကနေရှင်းလင်းထားရမည်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါရထားလမ်းလှည်းလည်း9လူတွေအတွက်အသုံးမပြုနိုင်မတော်တဆမှုများမှာ ...
ဘယ်လ်ဂျီယံ, သေလွန်သောသူတို့သည် 1 20 ဒဏ်ရာရသူများတွင်မီးရထားပျက်ကျမှု 19 / 02 / 2017 ဘယ်လ်ဂျီယံ, ဒဏ်ရာရ 1 သေပြီ 20 အတွက်မီးရထားပျက်ကျမှု: ဘယ်လ်ဂျီယံရဲ့မြို့တော်ဘရပ်ဆဲလ်မြို့အနီး, ရထားခုနှစ် 100 ခရီးသည်မတော်တဆမှုအဆိုပါရထားလမ်းကနေထွက်ပေါက်၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရသော 1 ခရီးသည်ရဲ့ဘဝဆုံးရှုံးခဲ့ရ,5မိုးသည်းထန်စွာ 20 ခရီးသည်တစ်ဦးခရီးသည်တင်ရထားမတော်တဆဘရပ်ဆဲလ် Liege ရထားဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ကိုရှာဖွေကြောင်းညွှန်ပြ ဒေသစံတော်ချိန် 12: 20 အဆိုပါလုပ်ရပ် 30 ၏မြို့တော်အတွက်နေရာ ယူ. , ချက်ချင်းအပြီး Leuven ဘူတာရုံ၏အရှေ့ဘက်ကီလိုမီတာ။ ရထားလွဲသွားမတော်တဆမှုအဖြစ်လှည်းသို့မဟုတ် 2, 1 ကလူကနဦးအစီရင်ခံချက်များအရသိရသည်သေဆုံးခဲ့သည်, အ520 ခရီးသည်အလေးအနက်ထားဒဏ်ရာရသည်။ 100 ကမတော်တဆထိခိုက်မှုအတွင်းရထားပေါ်တွင်ခရီးသည်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မတော်တဆမှုပြီးနောက်ဘရပ်ဆဲလ်နှင့် Liege အကြားရထား ...
ရထားလမ်းသမဂ္ဂများဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်သပိတ်ကိုဖွင့် 12 / 12 / 2014 သပိတ် 24 နာရီဖွင့်ရထားလမ်းလုပ်သားများအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်လုပ်ခဖြတ်တောက်မှုဆန္ဒပြ, အစိုးရရဲ့ခြိုးခြံခြွေတာရေးဆောင်ရွက်ချက်များဆက်စပ်အတွက်ဘယ်လ်ဂျီယံ: မီးရထားသမဂ္ဂများဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်သပိတ်ကိုဖွင့်။ အဆိုပါစပယ်ယာ၏ 3800 ပြည်ထောင်စုလုပ်သားများအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကဒီသပိတ်နှင့်အတူနိုင်ငံ၏ 60 ရာခိုင်နှုန်းအနီးကပ်ပြည်တွင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်ဖြစ်ပါတယ်။ Euronews ရဲ့သတင်းအဆိုအရ; တစ်ရက်သပိတ်မှောက်သငျသညျဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရထားလမ်းသမဂ္ဂများလုပ်ထားတဲ့ဘဝရပ်တည်ချက်အမှတ်ဆောင်ခဲ့လေ၏။ အစိုးရ၏ခြိုးခြံခြွေတာရေးဆောင်ရွက်ချက်များအတိုင်းအတာအတွင်းကိုဖန်ဆင်းလုပ်ခဖြတ်တောက်မှုဆန္ဒပြရထားလမ်းလုပ်သားတွေရဲ့သပိတ်မှကျေးဇူးတင်ပါသည်လည်းလေကြောင်းလိုင်းများအပေါ်ရပ်တန့်မယ့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် railways မဟုတ်ထံသို့ရောက်လာကြ၏။ ဘရပ်ဆဲလ်အခြေစိုက်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာလေကြောင်းခရီးစဉ်ထက်ဝက်နီးပါးဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ အငြိမ်းစားအသက် CGSP YUKSEL ပါလိမ့်မယ် ...
မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Aydin အတွက်ဝယ်လိုအားတိုးလာ
ဗိုလ်ကြီးရဲ့ Crossing တငျ့တယျဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ့်ညွှန်ကြားချက် Start မှတူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းကနေအာဒိုဂန်ဥက်ကဋ်ဌ
အဆိုပါ Marmaray လုပ်ဖို့ရာဖီတီပန်းချီသန့်ရှင်းရေး Kit
ARUS, Ferroviaria ရထားစနစ်များကို Fair မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကိုယ်စားပြုထားပါတယ်
ဘယ်လ်ဂျီယံ, သေလွန်သောသူတို့သည် 1 20 ဒဏ်ရာရသူများတွင်မီးရထားပျက်ကျမှု
အဆိုပါလေ့လာရေးခရီးဂျာမနီမှာရထားရပ်တန့်, ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံဗီယင်နာ၌ နေ.
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (116) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)